ICRC: Maxaabiis ka kala tirsan ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaan guryahooda kala geynay - BBC News Somali
3 Juunyo 2019
Image caption Guddiga caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas
17 xubnood oo ka kala tirsanaa xoogagga hubeysan ee Somaliland iyo Puntland, oo lagu qabtay dagaalkii deegaanka Tukaraq ka dhacay bishii May ee sanadkii 2018-kii ayaa la sii daayay, waxayna maanta dib ula midoobeen qoysaskooda, iyadoo arrintaasna uu suurtagaliyay guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas(ICRC).
Guddiga ICRC ayaa si isxilqaamid ah maxaabiistaas ugu kala dhoofiyay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe.
Howl wadeennada hay'adda oo si hoose ula hadlay maxaabiista la sii daayay ayaa ka hubiyay in la isku afgartay inay qoysaskooda ku laabtaan.
Mas'uuliyiinta Somaliland iyo Puntland ayaa dhawaan ku go'aansaday inay xorriyaddooda usoo celiyeen maxaabiistii ay ku kala qabsadeen dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee labada dhinac ku dhex maray deegaanka Tukaraq.
Hase ahaatee war saxaafadeed ay soo saartay ICRC ayey ku sheegtay in aysan ku lug yeelanin wax wadahadal siyaasadeed ah oo horseeday in maxaabiista la fasaxo.
Anjelina Polishchouk oo ah madaxa warbaahinta ee hay'adda ayaa muuqaal ay usoo direen BBC-da ku tidhi: "Maanta xubno ka tirsan ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa dib loogu celiyay guryahooda, guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa gacan ka geystay howshan. Laanqeyrta cas kama aysan qeyb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda, howsheenna kaliya waxay ahayd inaan xaqiijinno in dhammaantood aan si amaan ah iyo si iskood ah u kala geyno Hargeysa iyo Garoowe. Waxaan rajeyneynaa in dib u noqoshadooda ay farxad u keento qoysaskooda, maadaama ay munaasabadda Ciidda isla wada qaadan doonaan".
ICRC oo shaqaale badan eriday iyadoo uu socdo baaritaan dhaqan-xumo galmo
Hay'adda ICRC oo codsatay in la siidaayo shaqaale looga afduubtay Suuriya
Image caption ICRC ayaa si joogto ah ula socota xaalada maxaabiista ku xiran caalamka
Guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas(ICRC) ayaa si joogto ah u booqda isla markaana kormeera maxaabiista ku xiran guud ahaan caalamka, waxayna si toos ah ula socdaan xaaladahooda iyo sida loola dhaqmo.
Hay'adda ayaa ka hadasha sida ugu haboon ee ay tahay in loo maareeyo xaaladaha maxaabiista. Waxay sidoo kale soo bandhigtaa codadka qoysaska ay kasoo jeedaan, iyadoo hagaajisa xiriirka isgaarsiineed ee ka dhaxeeya maxaabiista iyo eheladooda.